Fil d'actualités du 19/08/2018
19/08/2018 - 18:00 : KUNG-FU WISA: Tontosa androany teny amin'ny amin'ny Lapan'ny Kolontsaina sy ny fanatankahantena Mahamasina ny fiadiana izay ho Tompondakan'i Madagasikara.
19/08/2018 - 15:00 : FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA: Nanatitra ny taratasy filantsahan-kofidiana androany ny mpandraharaha Eric Rajaonary, Tompon'ny orinasa Guanomad.
18/08/2018 - 14:00 : FANADINANA CEPE: Nivaly io maraina io ny valim-panadinana CEPE ao amin'ny CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRANO. Niakatra 80 % ny taham-pahafahana tamin'ity taona ity, raha toa ka 57 % izany ny taon-dasa.
18/08/2018 - 13:00 : KOFI ANNAN: Nodimandry androany teo amin'ny faha-80 taonany i Kofi Annan, Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana teo aloha, izay efa nahazo ny amboara Nobel ho an'ny fandriampahalemana. Teratany Ganeanina izy.
18/08/2018 - 10:45 : FIROTSAHAN'I MARC RAVALOMANANA HO FILOHA: Ny zanany dia i Saraha Ravalomanana no tonga manatitra ny taratasy eny amin'ny HCC Ambohidahy hatrehan'ireo mpanotrona maro be.
18/08/2018 - 10:00 : FIFIDIANANA : Hanatitra ny antontan-tararatasiny eny amin'ny HCC anio ny kandida Eliana Bezaza, raha tsy misy ny fiovana
17/08/2018 - 15:00 : HERY RAJAONARIMAMPIANINA: Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny haha kandida filoha azy ny tenany androany ary efa tafapetraka ny firotsahan-kofidiana amin'ny anaran'ny antoko HVM.
17/08/2018 - 14:30 : KIDNAPPING: Nisaotra ny mpitandro filaminana tamin'ny vokatra azo nahafatesana mpaka an-keriny roa sy nahasamborana ny namany teny Anosivavaka Ambohinarina ny Fikambanan'ny Teratany Karana mizaka ny zom-pirenena Frantsay.
17/08/2018 - 12:35 : HERY RAJAONARIMAMPIANINA : Migadona ao amin'ny Hotely Colbert izy sy ny vady aman-janany amin'izao ora sy fotoana izao.
17/08/2018 - 11:30 : HOTELY COLBERT ANTANINARENINA: Vory lanona ny mpanohana an-dRajaonarimampianina ary andrasana ny mety ho fahatongavany sy hanaovany fanambarana anio.
Archive du 20171129
Lalao Ravalomanana Hosoloina PDS mialoha ny martsa 2018 ?
Misoko miadana ny fikotrehana ny fanalana ny ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana, ka hosoloina PDS.
Diplaomasia Misisika eto Madagasikara koa i Belzika
Nifantoka tamin’ny fanatsarana ny fiaraha-miasan’ny parlemanta Belza sy Malagasy ny resaky ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly sy ny delegasionina Parlemantera Belza avy any amin’ny Parlement de la Fédération Wallonie – Bruxelles (PFWB) notarihan’Atoa Philippe Courard, teny Mahazoarivo omaly.
Fampielezan-kevitra Ataovy maharitra volana maro, hoy ny KMF/Cnoe
Na ahoana na ahoana fomba filaza, dia efa mazava izao fa mahazo tombony amin’ny fampielezan-kevitra momba ny fifidianana rehetra izay ho avy eo ny antokon’ny fitondrana HVM.
TIM Arivonimamo Miomana hamerina an’i Dada eo amin’ny fitondrana
Mbola tsaroan’Arivonimamo ny asa fampandrosoana nipaka tamin’ny fiainan’ny mponina sy hita taratra teny anivon’ny kaominina nandritra ny fitondrana Marc Ravalomanana. Mangetaheta ny hiverenany indray eo amin’ny fitondrana ny any an-toerana. Handray andraikitra izy ireo, dieny izao anatin’ny zotram-pifidianana izao.
Fikambanana H.O.P.E Hanao loa-bary an-dasy momba ny fifidianana
Amin’izao vanim-potoana fanomanana ny fifidianana izay hatrehan’ny vahoaka Malagasy amin’ny 2018 izao, dia manentana ny olom-pirenena rehetra ny fikambanana H.O.P.E (Hetsika olom-Pirenena Entanina), mba samy handray ny andraikiny tandrify azy avy mba hahatomombana an-tsakany sy an-davany izany fotoan-dehibe ho an’ny firenena izany.
Miarahaba Jean a ! Ataoko kosa angamba fa efa afaka tsara ny makafoka taorian’ny revy be nataonareo tany andrefana iny a ! Fa dia tena nahavita tokoa aloha ianareo a ! Ahoana ny fandehany tany ?
Volabe 1,6 miliara euros any Frantsa Malagasy 5 no tompony
Maro ireo mpandraharaha, lehibena orinasa, mpitondra teo aloha, mpanao politika, tompon’andraiki-panjakana ambony eto Madagasikara no misafidy ny hitahiry ny volany amin’ny banky any ivelany.
Varotra korotam-by na “brocanteur” Mameno tanteraka ny lalam-baovao eny Manarintsoa Isotry
Lasa nihamaro dia maro nihoatra ny teo aloha ireo varotra korotam-by isan-karazany sy ny varotra piesina fiara efa niasa na ilay antsoin’ny maro hoe entana “brocanteur” eny amin’ny lalana vao namboarina mba hialana amin’ny fitohanan’ny fifamoivoizana eny amin’iny faritra iny.
Efa tena mitady loza
Ny hatramin’izay mety ho vita ihany, fa ny ho avy no mety efa tena mihoatra ny tokony ho izy raha tanteraka tokoa. Ny kajy politikan’ny fanjakana HVM amin’ny fifidianana ho avy no tian-koresahana eto. Mandeha ny fomba rehetra hisakanana ny kandida amin’ny fifidianana ho avy
Loza mahatsiravina Potika tanteraka ilay zaza voahitsaky ny kamiao
Nitrangana lozam-pifamoivoizana nahatsiravina tany amin’ny fokontany Tsarafara, avaratr’i Lempona, distrikan’Antanifotsy ny zoma lasa teo.
Fivoriana momba ny zon’olombelona any Génève Nasain’ny Croix Rouge ny Zandarimaria
Tsy maintsy manaja ny zon’olombelona ny zandary mandritra ny fanatanterahana ny asany rehetra na inona na inona iraka azony ary na aiza na aiza toerana hanaovana azy,
Aretina SIDA Malagasy 2279 no voany, maro an’isa ny lehilahy
Ny 0,2%-n’ny Malagasy no mitondra ny otrikaretina Vih/SIDA ankehitriny, izany hoe 2.279 izay efa mihinam-panafody manaraka fitsaboana avokoa.
Fandraharahana eny anivon’ny banky Mbola tena mampalaina ny Malagasy
Mbola latsaky ny 10 %-n’ny Malagasy no mampiasa ny asa fandraharahana eny anivon’ny banky. Anisan’ireny ny fitehirizam-bola, ny fihindramam-bola….
Mahajanga- Mpianatra noroahina tamin’ny trano Matin’ny tazomoka ny tovolahy iray
Nodimandry tao amin'ny hopitaly CHU PzaGa Androva, rehefa notsaboina nandritra ny 5 andro i Marco Fabrice, 20 taona, avy any amin'ny distrikan’Ambanja, Faritra DIANA,
Symposium International d’Histoire, Civilisation et Culture Hotohanan’ny vondrona STAR
Sambany no hotanterahina eto amintsika ilay hetsika “Symposium International d’Histoire, Civilisation et Culture » andiany voalohany.
Toamasina Nanakiana mafy ny zandary ny Procureur
Aoka tsy ny fitsarana irery no hosoram-potaka na kianina momba ny raharaha fitoraham-bato tao Brickaville ka namotsorana ny olona roa (lahy sy vavy) noho ny tsy fahampian’ny vesatra hiampangana azy ireo. Ireto olona ireto no nambara fa atidoha mpaniraka ny mpitora-bato.